Trano Fisakafoanana Miaraka amin'ny fahamatorana tsikelikely ny aesthetika sy ny fiovana aestetika an'ny olombelona, ny fomba maoderina izay manasongadina ny maha-tena sy ny maha-olona dia nanjary singa manan-danja amin'ny famolavolana. Ity raharaha ity dia trano fisakafoanana iray, ny mpamorona te-hamorona traikefa ho an'ny tanora amin'ny mpanjifa. Zavamaniry manga sy volondavenona ary maintso dia mamorona fampiononana sy vonjy ahitra ho an'ny toerana. Ny chandelier vita amin'ny tanona vita amin'ny tanany vita amin'ny tanana sy metaly dia manazava ny fifandonan'ny olombelona sy ny natiora, mampiseho ny maha-zava-dehibe ny fisakafoanana iray manontolo.
Talata 14 Septambra 2021
Ny Famolavolana Anatiny Eataly Toronto dia mifanaraka amin'ny fivoaran'ny tanànantsika mitombo ary natao hanatsarana sy hampiakarana fifanakalozana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fiakaran'ny sakafo italiana lehibe. Mety fotsiny ny hoe "passeggiata" nentim-paharazana sy maharitra mandritra ny famoronana ho an'ny Eataly Toronto. Io fombafomba tsy misy farany io dia mahita ny Italiana isaky ny hariva mankamin'ny làlana lehibe sy piazza, mandehandeha sy manao asa sosialy ary indraindray mijanona eo amin'ireo bara sy fivarotana eny an-dalana. Ity andian-javatra niainana ity dia mitaky ny lalana an-dalambe vaovao mifono lalana ao Bloor sy Bay.
Alatsinainy 13 Septambra 2021
Trano Fisakafoanana Fivarotana Trano Fonenana Ny Dobo Filomanosana Ny Famolavolana Anatiny Trano Fiangonana